Amapaneli weSolar Solar, Amapaneli weSolar ajwayelekile, Amapaneli Elanga Elincane Elincane - Amso
I-Amso Solar igxile ekukhiqizweni kwamaseli elanga namapaneli elanga aqinisekiswe yimvume yethu yeminyaka engama-25. Olayini bethu bokukhiqizwa kwamapaneli elanga bahlanganisa uchungechunge lwe-5BB ne-9BB, uhla lwamandla kabanzi kusuka ku-5w kuye ku-600w.
9BB 144 isigamu amaseli panel solar zonke mono omnyama ...
I-9BB 144 yamaseli wesigamu amaphaneli elanga mono 430w
Amaseli angama-72 usayizi ojwayelekile wamamoya amnyama welanga ...
Amapaneli amancane elanga ayenziwe ngokwezifiso amaseli we-poly 20w
Amso Solar Ubuchwepheshe Co., Ltd. ingumkhiqizi wamapaneli elanga athuthukiswe ngaphezulu kweminyaka eyi-12. Sinokuhlangenwe nakho okugcwele kuzo zombili izinsizakalo ze-OEM ne-ODM. Eminyakeni edlule, Sisungule izinkampani eziqinile ezinemikhiqizo eminingi kanye nabakhiqizi bethimba elilodwa. Sasungulwa ngokusemthethweni ngo-2017 ukuletha umkhiqizo wethu: Amso Solar. Imboni yethu iseduze neHongZe Lake enhle, eseHuaian, JiangSu, China.
Emakethe yakamuva, uzwa abantu bekhuluma ngama-5BB, 9BB, M6 type 166mm solar cells, no-half cut solar panels. Ungahle udideke ngayo yonke le migomo, ayini? Yini abayimele? Uyini umehluko phakathi kwazo? Kulesi sihloko, sizochaza kafushane konke okushiwo ngumqondo ...
zithini izingxenye zephaneli elanga
Okokuqala, ake sibheke umdwebo wezinto zamaphaneli elanga. Isendlalelo esiphakathi impela ngamangqamuzana elanga, ayisihluthulelo nesisekelo sephaneli lelanga. Kunezinhlobo eziningi zamaseli elanga, uma sixoxa ngokubuka kosayizi, uzothola osayizi abathathu abakhulu belanga ...
I-Amso Solar Technology Co., Ltd.